राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकीको कार्यालय उद्घाटन – Tandav News
Tandav News द्वारा	 २०७८ श्रावण ९ गते शनिबार १३:०५ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । आज (शनिबार) एक समारोहका बिच गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
पोखरा-९ स्थित कार्यालय परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका गुरुङले देशको युगान्तकारी परिवर्तनमा उल्लेखनिय योगदान रहेको बताए । उनले युवाहरुलाई रचनात्मक तवरले वर्तमान राजनीतिक चलखेलको प्रतिकार गर्न समेत सुझाए । ‘अब पुत्ला जलाएर हुँदैन, त्यो फेज आउट भैसक्यो । अब भएका गलत कुराहरु, के कारणले गलत भयो ? कसरी गलत भयो ? त्यो जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमाले कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले युवा एकतालाई थप सुदृढ गराउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीब पहारीले केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्मका संगठनमा उमेर हद तोक्नुपर्ने बताए । ‘अब उमेर हद पनि तोकिनुपर्छ । पार्टी संगठनलाई थप मजबुद र चलायमान गराउन यसले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ ।’ उनले भने ।
समारोहमा बोल्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक महेन्द्र गुरुङले युवा संघका कार्यक्रमहरु ध्वंसात्मक नहुने स्पष्ट पारे । देशमा राजनीतिक स्थायीत्व स्थापनार्थ युवा संघले अब रचनात्मक कार्यक्रमहरु गर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता र सम्बद्ध संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।